Delish တွင်မူလထုတ်ဝေသောဆောင်းပါး၊ မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ က Alexis Morillo
ငါ၏အအဓိကအစားအစာအုပ်စုများနှစ်ခုဖြစ်ကြသည် Hot Cheetos ဆူရှီနှင့်ငါနှစ်ခုစလုံးအတူတကွမသွားနိုင်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်း Frito-Lay နှင့် Hissho Sushi တို့သည်သက်သေပြရန်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ အတူတူ, ဒီအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခု Hot Cheetos ကနေထပ်တိုးစပ်အကြပ်အတည်းရှိပါတယ်တဲ့ဆူရှီလိပ်အတူတကွပါပြီ။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းလား သင်စမ်းကြည့်ဖို့ကုန်စုံဆိုင်အတော်များများမှာရှာတွေ့နိုင်တယ်။
Cheetos Flamin 'Hot Roll ဟုနာမည်ကြီးစွာခေါ်ဝေါ်သောဤထူးခြားသောဆူရှီလိပ်ကို“ Spicy Krab” ထောပတ်သီး၊ ဒိန်ခဲ၊ သခွားသီး၊ ကြိတ်ခွဲထားသော Cheetos နှင့်အလွန်ပူပြင်းသောမေozzများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒိန်ခဲ၊ သခွားသီးနှင့်ထောပတ်သီးပေါင်းစပ်မှုတို့သည် Cheetos မှအမွှေးအကြိုင်ကိုအေးစက်စေရန်ကူညီသည်။
Hissho ဆူရှီ (@hisshosushi) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
၎င်းသည်နေရာအနည်းငယ်တွင်သာရရှိနိုင်သောအလွန်ထူးကဲသောအစားအစာကော်ဇောများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း Hissho Sushi အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြည်နယ် ၃၃ ခုနှင့်ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိအဓိကစူပါမားကက်များတွင်သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ပစ်မှတ်, Stop & Shop၊ Meijer၊ Kroger၊ Giant Food နှင့် Safeway နှင့်လက်လီရောင်းချသူများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။ Hissho ဆူရှီဝက်ဘ်ဆိုက်.
အကယ်၍ သင်ဒီ combo ကိုမရောင်းပဲနေလျှင်၊ Hot Cheetos ထို့အပြင်ဂန္ထဝင်စပ်ဂဏန်းစာလိပ်သို့အကြပ်အတည်းနှင့်အမွှေးအကြိုင်နှစ်ခုလုံးကိုဖြည့်စွက်ပေးသည့်အရာအဖြစ်ဖြည့်စွက်သည်။ ဒီအရသာနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်ဖို့ Wasabi ကိုသုံးပြီးဒါမှမဟုတ်ဆူရှီလိပ်တွေကို Tempura အတွင်းမှာမှာထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Hot Cheetos ကဒီမှာသွားဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့နည်းလမ်းပါ! ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်စမ်းမကြည့်မချင်းဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်သင့်အနီးဆုံးကုန်စုံဆိုင်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ဘေးချင်းမှာပဲပိစပ်ကိုမမေ့ပါနှင့်။
အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ - ဒီဆူရှီအမှတ်တံဆိပ်ဟာ Cheetos Flamin 'Hot Roll ကိုပဲထုတ်လိုက်ပြီးကိုက်တစ်ခုချင်းစီကိုရိုက်လိုက်သည်
Mashed: လူတွေဟာဒီ Flamin & #039 အကြောင်းပြောခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ Hot Cheetos ဆူရှီ